နေအိမ် / အနုညာတစီရင်ကုန်ကျစရိတ် / အနုညာတစီရင်၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့် Duration:
လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကျော်, အတော်ကြာခုံသမာဓိအဖှဲ့အစညျးမြားခုံသမာဓိ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ကြာချိန်နှင့် ပတ်သက်. အချက်အလက်များ၏အနှစ်ချုပ်များဖြန့်ချိခဲ့ကြ. ထိုကဲ့သို့သောအဖွဲ့အစည်းများအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်၏လန်ဒန်တရားရုံးတို့ပါဝင်သည် ("LCIA") (ကနေဒေတာတွေကို3နိုဝင်ဘာလ 2015), စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးစတော့ဟုမ်းကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏အနုညာတစီရင် Institute က ("SCC") (ကနေဒေတာတွေကို 24 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2016) နှင့်စင်္ကာပူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ရေးစင်တာ ("SIAC") (ကနေဒေတာတွေကို 10 အောက်တိုဘာလ 2016).
ဆုံးမကြာသေးမီကဖြန့်ချိဒေတာဟောင်ကောင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်ရေးစင်တာမှ ("HKIAC"), ပေါ်ဖြန့်ချိ 15 ဒီဇင်ဘာလ 2016, ခွဲခြားစိတ်ဖြာကုန်ကျစရိတ်နှင့်၎င်း၏အောက်တွင်ခုံသမာဓိဖြစ်ပွားမှု၏ကြာချိန် 2013 စည်းကမ်းများ.
စာရင်းအင်းများပေါ်တွင်အခြေခံခဲ့သည် 41 ၏အစအဦးကတည်းကတင်သွင်းအမှုပေါင်း 2014 တစ်တစ်နှစ်အောက်မှာကြာမြင့်ခြင်းနှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာထက်လျော့နည်းကုန်ကျ 32,000.
အဆိုပါဒေတာ HKIAC မှာခုံသမာဓိ၏ယုတ်စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသ 65,721 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ 52,643 အနုညာတခုံရုံးရဲ့အဖိုးအခနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာအဘို့ 13,077 အဆိုပါအနုညာတစီရင်ရေးစင်တာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအခကြေးငွေများအတွက်).
ခုံသမာဓိ၏ကြာချိန်သည်, ဒေတာတစ်ခုခုံသမာဓိနေသမျှကာလပတ်လုံးအမြန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအောက်မှာကောက်ယူသည့်အခါဝက်ကြောင်းပြသ (လှည့်ပတ်6လများ), အုပ်ချုပ်ရေးအခကြေးငွေပိုပြီးစျေးကြီးခဲ့ကြသည်ပေမယ့် (အမေရိကန်ဒေါ်လာ 2,000 ပျမ်းမျှအားဖြင့်ပိုမို). အံ့သြဖွယ်များမပါဘဲ, အရေးပေါ်ခုံသမာဓိရုံးအမှုတွဲ atypical ခုံသမာဓိတရားစွဲဆိုမှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌စျေးအကြီးဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်. အရေးပေါ်ခုံသမာဓိရုံးရဲ့အဖိုးအခကို USD မှစောဒနာမယ်လို့ 35,225, အဆိုပါအနုညာတစီရင်ရေးစင်တာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအခကြေးငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာမှစောဒနာမယ်လို့စဉ် 5,798, တိုတောင်းတဲ့ 14-နေ့ကရှေ့ဆက်ဘို့.
ဒါဟာ SIAC နှင့် HKIAC နှစ်ဦးစလုံးကိုအများဆုံးကုန်ကျစရိတ်နှင့်အချိန်-အကျိုးရှိစွာစနစ်များရှိသည်ဖို့ပေါ်လာသောဒေတာများအနေဖြင့်မှတ်သားဖို့လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်, ထိုကဲ့သို့သော LCIA နှင့် SCC ကဲ့သို့သောအခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ, ဒီကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောအငြင်းပွားမှုအတွက်ငွေပမာဏကဲ့သို့သောအခြားအချက်တွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေမယ့်.
ခုံသမာဓိ Institution မှ အားလုံးခုံရုံးများအတွက်ပျမ်းမျှကြာချိန် (လများ) ဝါးခုံသမာဓိရုံးခုံရုံးများအတွက်ပျမ်းမျှကြာချိန် (လများ) သုံးဦးပါခုံရုံးများအတွက်ပျမ်းမျှကြာချိန် (လများ)
HKIAC 11.6 မရရှိနိုင်ပါ မရရှိနိုင်ပါ
ခုံသမာဓိ Institution မှ အားလုံးခုံရုံးများအတွက်ပျမ်းမျှအုပ်ချုပ်ရေးအခကြေးငွေ ဝါးခုံသမာဓိရုံးခုံရုံးများအတွက်ပျမ်းမျှအုပ်ချုပ်ရေးအခကြေးငွေ သုံးဦးပါခုံရုံးများအတွက်ပျမ်းမျှအုပ်ချုပ်ရေးအခကြေးငွေ
SIAC အမေရိကန်ဒေါ်လာ 5,853 အမေရိကန်ဒေါ်လာ 5,836 အမေရိကန်ဒေါ်လာ 6,723
HKIAC အမေရိကန်ဒေါ်လာ 9,281.49 မရရှိနိုင်ပါ မရရှိနိုင်ပါ
LCIA မရရှိနိုင်ပါ မရရှိနိုင်ပါ မရရှိနိုင်ပါ
SCC မရရှိနိုင်ပါ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်
အမေရိကန်ဒေါ်လာ 6,924.12 ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်
ခုံသမာဓိ Institution မှ အားလုံးခုံရုံးများအတွက်ပျမ်းမျှခုံရုံးအခကြေးငွေ ဝါးခုံသမာဓိရုံးခုံရုံးများအတွက်ပျမ်းမျှခုံရုံးအခကြေးငွေ သုံးဦးပါခုံရုံးများအတွက်ပျမ်းမျှခုံရုံးအခကြေးငွေ
SIAC အမေရိကန်ဒေါ်လာ 26,852 အမေရိကန်ဒေါ်လာ 22,449 အမေရိကန်ဒေါ်လာ 70,904
HKIAC အမေရိကန်ဒေါ်လာ 19,587.63 မရရှိနိုင်ပါ မရရှိနိုင်ပါ
SCC မရရှိနိုင်ပါ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 18,172.02 ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 133,349.64